I ubiquity wireless indlela yokudlulisa ulwazi nge-Wi-Fi kanye khulula Ukufinyelela i-Inthanethi umphakathi amaphuzu okuholela yokuthi inethiwekhi wireless ngokuyinhloko esikhundleni bendabuko yezintambo uxhumano indlela.
Ngesikhathi esifanayo kwi-ajenda kukhona umbuzo mayelana nokuvikelwa amanethiwekhi zabo okungenantambo kusuka ekuxhumaneni okungagunyaziwe. Ngamanye amazwi, kukhona isigaba abasebenzisi afisa omunye (kuleli cala - yakho) akhawunti ukufinyelela ku-intanethi. Namuhla sibheka indlela ongavikela ukufinyelela kunethiwekhi engenantambo, okudingeka ukwenze ukukwenza, futhi yiziphi izindlela ukuvikelwa enokwethenjelwa kakhulu.
Imibuzo ukuthi sizobe sikhumbule namuhla: ukuthi ukubeka iphasiwedi ku umzila, ukuthi ungasetha kanjani ukufinyelela, yini okufanele uyenze uma udala inethiwekhi evikelekile.
Ukuze uqale, ake sibheke ukuthi umzila, futhi kungani kudingeka ufake iphasiwedi kuso.
Router (umzila, ukufinyelela iphuzu) - idivaysi ihlinzeka "esandleni Inthanethi" by kwentambo-Wi-Fi. Ixhunyiwe kwi-ngocingo umugqa ngaphandle kwalo (sokufinyelela inethiwekhi ifoni iqalwa kwimodi ejwayelekile) noma ukusebenzisa umugqa yaqashiswa kwi-Inthanethi (olunikezwa abahlinzeki besevisi - abahlinzeki Ukufinyelela i-Inthanethi amasevisi).
Nale divayisi kudala inethiwekhi wireless wendawo, abasebenzisi Ungaxhuma ke kwentambo usebenzisa i-Wi-Fi module kudivayisi yabo. Kuyini ezithakazelisayo abathengi ezingaba:
Asikho isidingo ivayolini izintambo ukwakha inethiwekhi yendawo.
LAN Wi-Fi ivumela abasebenzisi ukuxhuma kuyo futhi basebenze ngokuthula, naphezu kwezithiyo: izindonga isakhiwo, izihlahla, ukuphazamiseka.
Phakathi izenzo isignali yenethiwekhi umsebenzisi angakwazi ukuhambisa ngokuphelele ngokukhululekile, ngaphandle kwemingcele.
Ukwakha inethiwekhi udinga ukuthenga idivayisi (umzila / umzila), obiza siluhlaza amayunithi mayelana 20-30 American. Kungaba izimo zivuma cishe wonke umsebenzisi.
Manje-ke sifika ukuzivikela. Kungani futhi kanjani ukubeka iphasiwedi on a router. Impendulo izakhamuzi zethu isobala: uma ungakwazi awafuni ukuxhumeka kunethiwekhi yomunye - njalo azimisele ukusizakala ke (Qiniseka lokhu!). Uma udale i olungavikelekile (bushelezi mo) inethiwekhi - okusho ukuthi wonke umsebenzisi likwazi ukufinyelela traffic yakho futhi imininingwane yakho eyimfihlo.
Kuyini kubabangele: ephawulekayo wehlise ijubane Inthanethi, abahlaseli usebenzisa izinhlelo ezithile, angase athathe idatha ukuze ungene ku amawebhusayithi ahlukahlukene ngaphansi igama lakho. Ngaphezu kwalokho, uma usebenzisa uhlelo electronic lokukhokha - idatha yakho ingebiwa. Kufana, yini okumelwe uyishiye ngeviki, inyanga noma unyaka isikhwama sigcwele imali emnyango efulethini lakhe, futhi ukuzikhohlisa ukucabanga ukuthi akekho umuntu athathe izintambo lapho.
Indlela elula ukuvikela inethiwekhi yakho - ukubeka iphasiwedi on a router ukudala engenantambo inethiwekhi yendawo. Ngakho, sakha okuphephile (evikelekile) inethiwekhi ukuxhuma okungase kube iyona kuphela owazi iphasiwedi.
Indlela ukukwenza? Kukhona izinketho ezimbili indlela usethe iphasiwedi ku-router futhi ukwakha inethiwekhi okuvikelekile:
Lapho uqala ukuxhuma idivayisi usebenzisa ukufakwa CD, okuyinto kukusiza ukuba ngokushesha ukwakha inethiwekhi entsha ngaphandle ezingadingekile nobunzima bobuchwepheshe. Lapho edala inethiwekhi, ucacise uhlobo (evulekile / avaliwe noma eyingozi / ephephile). Lapho ekhetha indlela yokuvikela, kuyatuseka ukuba ukhethe indlela onokwethenjelwa ukubethelwa kwedatha WPA2, futhi sisebenzise ulwazi kulokhu kubukeza kwethu sendlela ukubeka iphasiwedi on a router, okuzoba nzima ukuthola. Ungasebenzisi iphasiwedi, igama lakho, inombolo yocingo, usuku lokuzalwa noma olunye ulwazi butholakale ngawe noma obathandayo
Vikela wenethiwekhi yakho, unga ngasiphi isikhathi ngokuya izilungiselelo router. Ukuze wenze lokhu kwibha yekheli yesiphequluli sakho Inthanethi, uhlobo 192.168.1.1, noma ecelwa, faka igama (admin) nephasiwedi (admin). Lolu chungechunge luyonikeza ukufinyelela izilungiselelo lapho ungacacisa uhlobo ukubethela nephasiwedi ukubhalisa sokufinyelela abasebenzisi inethiwekhi.
Sesihlole yini okufanele uyenze futhi kanjani. Uma inethiwekhi yakho engavikelekile - ungalibali: usethe iphasiwedi, ukubhalisa ukubethelwa kwedatha imodi, futhi uvikelekile ulwazi lomuntu siqu kubaduni. Ngithemba ukuthi manje wazi ukuthi ukubeka iphasiwedi on a router Wi-Fi.
Kuzosiza sithole choice of version kwecala Kaspersky
Indlela ukufaka isifanekiso ubuso ku "Photoshop"?
Hkey Local Machine - kanjani? Hkey Machine Local kwi "windose" ikuphi?
Imigomo ukufakwa amamitha amanzi: odinga ukukwazi?
RAM - lokho kusho ukuthini futhi kusebenza kanjani?
Ukungezwani kokushisa emakhazeni: ukwelashwa kuphela ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe
Kanjani ngithuma amafayela nge "Skype": umhlahlandlela emfushane